भएन अनुगमन प्रभावकारीः ठगिदै उपभोक्ता !
म्याद सकिएका सामान विक्रि भएको देख्दा समेत नियमन निकाय मौन
निर्माण सञ्चार, जुम्ला | जुम्लाका डिलर तथा प्रत्येक पसमालमा म्याद सकिएको सामान भेटिने गरेका छन् । सोही ठाउँमा नागरिक यसबारे सचेत छैनन् ।
गाउँबाट आएका स्थानीयलाई सामान किनेर घर फर्कन हतारो हुन्छ । तर, सामानको उत्पादन मिति, सकिएको मिति हेर्ने ज्ञान पनि छैन । व्यपारिले जस्तो समान दियो सोही समानको मिति नहेरि लाने गर्दछन् ।
सामानको मिति सकिएकै भएपनि यसबारे जुम्लीबासीलाई कुनै जानकारी हुँदैन । बजार अनुगमन पनि प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
प्रत्येक महिनाको एक पटक सरोकारवालाको सहभागितामा बजार अनुगमन हुन्छ । तर, औपचारिक निभाउने शैलीमा मात्रै । पहिलो पटक म्याद सकिएको सामान भेटिएको पसलमा दोस्रो पटक जादाँ पनि भेटिएका हुन्छन्, तर अनुगमन टोलीले कावार्ही भने गर्न सक्दैनन् ।
अर्को पटक यस्तो भेटिए कार्वाही हुन्छ भन्दै टार्ने काम गरिरहेका छन्, अनुगमन टोलिले ।
नागरिक समाज जुम्लाका सचिव शरोज शाही भन्छन्,‘प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा, उपभोक्ता ठगिएका छन्, तर यस विषयमा प्रशासन, लगायत अन्य निकाय गम्भीर देखिएका छैनन् ।’
औपचारिकतामै सिमित पार्ने जुम्लाको बजार अनुगमनले यहाँका उपभोक्ता पसलपिच्छे ठगिने गरेका त छन् । तर, त्यसले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा पार्ने असरको जिम्मेवारी लिने कसले ?
दैनिक उपभोग्य वस्तु प्राय म्याद सकिएको विक्रि वितरण भईरहेको छ भने उपभोक्ता खाईरहेका छन् । तर नियमन निकाय मौन छ, जसको फाईदाँ उठाएर जुम्लाका व्यापारीहरुले उपभोक्तालाई ठग्दै आएका छन् ।
गएको हप्ता, जुम्ला बजारमा अनुगमन गरियो ।
अनुगमनकै क्रममा म्याद सकिएको सामान उपभोक्ताले खरिद गरेकै अबस्थामा भेटिदा समेत पनि अनुगमन टोलीले कुनै कदम चाल्न सकेन ।
हालसम्म कुनै व्यापारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेकै कारण जुम्लामा व्यापारका नाममा ठगि धन्दा चल्दै आइरहेको छ ।
बजार अनुगमनका बेला झण्डै ४ वटा डिलरमा म्याद सकिएका विभिन्न सामान भेटिए ।
तर, अनुगमनका अगुवाई गर्ने प्रशासन, स्याउ प्रशोधन तथा गुणनियन्त्रण कार्यालय सबै मौन नै फर्किए । अर्कोपटक भेटिएमा कार्बाहि हुन्छ भन्दै पहिलेकै शब्द दोहोराएका थिए, उनीहरुले ।
तर, जुम्लीबासी कित ठगिएका छन्, स्वास्थ्यमा कति प्रतिकुल असर परिरहेको छ, यसबारे बुझेरै बुझपचाएको अवस्था देखिन्छ । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षित गर्नका लागि चेतना अभिबृद्धि कार्यक्रम गरिनुपर्ने स्थानीय शुर बुढाले बताए ।
उनले भने ‘सामान किन्दा मिति कहाँ हुन्छ थाहा पाउँदैनौँ, किन्छौँ/खान्छौँ पछि स्वाथ्यमा खराबी आएपनि अरु नै कारण सोच्छौ, यस विषयमा चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनैपर्छ ।’
प्रशासन कार्यालय, जिप्रका, स्याउ प्रशोधन लगायतका नियमन निकाय अगाडिका पसलमा दैनिक म्याद सकिएका सामान खरिद विक्रि हुँदै आएको छ । तर, पनि वेवास्ता भइरहको छ ।
प्राय, चाउचाउ, विस्कुट, दालमोट, लगायतका जंग फुडहरु बढी म्याद सकिएका भेटिन्छन् ।
जो प्राय बालबालिका बढी प्रयोग गर्छन् ।
अनुगमन प्रभावकारी बनाउ
अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सयंन्त्र बलियो हुन आवश्यक छ । स्याउ प्रशोधन तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख अमृत भुषण दाहालले भने, ‘प्रभावकारी तथा गाउँकेन्द्रित अनुगमनमा जोड दिईने छ, कानुनको दायारामा रहेर उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कार्वाही हुन्छ ।’
अघिल्ला दिनमा भएका कमजोरी सच्याएर जुम्लामा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको प्रमुख दाहालको भनाई छ ।
यता,सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर बुढ्थापा, गाउँ–गाउँमा चेतना अभिवृद्धिलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
एक पटकपछि फेरि भेटिए सिधैँ कानुनअनुसार कावार्ही हुनेमा शंका नगर्न संचारकर्मीलाई आग्रह गरे । दशै लक्षित बजार अनुगमन निकै कडाईका साथ गरिने सहायक प्रजिअ बुढ्थापाको दाबी छ ।
संवैधानिक व्यवस्था र प्रचलित उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ एवं नियमावली, २०५६ लगायतका दर्जनौँ कानुनमा उपभोक्ताका अधिकारलाई सुरक्षित गर्न बजार अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कालोबजारी, बढी मूल्य असुल्ने र मिसावट गरी उपभोक्ताको जीउ ज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा हानी पुर्याउने दोषीलाई कारबाही गरी बजारलाई स्वस्थ्य र स्वच्छ पार्न सरकारले नीति लिएको छ ।
तर, कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा समस्या भएको कानुनविद् बताउँछन् ।
सरकारले कानुन थुप्रै बनाएको छ ।
तर, दायरामा ल्याउन नसक्दा बजार क्षेत्रमा बेथेति बढ्दो रहेको अधिवक्ता पदम बहादुर शाहिको भनाई छ ।
वस्तु वा सेवाको अनुचित सञ्चय गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्ने, वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिभाषा वा मूल्यमा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरी लाभ लिने, स्वच्छ बजार तथा उपभोक्ता हित प्रतिकूल कार्य गरी कालोबजारी, एकाधिकार लगाउनु नागरिकको हित र कानुन विरित हो ।
यस्ता क्रियाकलापलाई बजार अनुगमनको माध्यमद्वारा नियन्त्रण गरी त्यस्तो कार्य गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रावधान संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९ मा रहेको छ ।
उपभोग स्थललगायतका ठाउँमा वस्तु वा सेवाको दर्ता, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनलगायतका व्यापारिक क्रियाकलापको नियमन गर्ने सरकारी निकायद्वारा संयुक्त बजार अनुगमन प्रभावकारी नभए स्वत्तह नागरिक ठगिने युवा पदम सुवर्णकारको भनाई छ ।
यसमा सुधार गर्न उनको जोडदार माग छ ।
तर, बजार अनुगमनलाई एकीकृत तथा प्रभावकारी तुल्याउने र स्वच्छ बजार तथा स्वस्थ नागरिक बनाउने संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९ को उद्देश्य रहको छ ।